Dr. Tint Swe's Writings: Aphasia (2) စကားမပီသတဲ့ရောဂါ
Aphasia (2) စကားမပီသတဲ့ရောဂါ
ဆရာ သမီးအသက်၂၉ နှစ်ပါ။ ကိုယ်ဝန် ၆ ပတ်မှာ ခလေးမယူချင်သေးလို့ ဆေးသုံးပြီးဖျက်ချလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဖျက်ချပြီးမှ သွေးတွေဆင်းပြီး ဖျားတာတော်တော်ကြာပါတယ်။ အဲတာနဲ့ သအိမ် ချစ်ရမယ်ထင်ပြီး သွားချစ်လိုက်ပါတယ်။ ဆရာဝန်ကလည်း ဘာမှမပြောဘဲ ချစ်လိုက်ဆိုတော့ချစ်လိုက်တယ်။ သအိမ်ချစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်း သွေးတွေ ဆက်ဆင်းတာ မရပ်ဘူး။ ဗိုက်လည်းနာတယ်။ ဆီးတွေလည်း ခနခနသွားချင်တယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလည်းဆရာ။ တစ်လလောက်ရှိပါပြီ။
(ကလေး) လို့ရေးရတယ်။ (ခြစ်) လို့ရေးရတယ်။ (သားအိမ်) လို့ ရေးရတယ်။ (ခဏခဏ) လို့ရေးရပါတယ်။
စောစောကလည်း တယောက်က (ပီ) နဲ့ (ပီး) လို့ရေးတယ်။ (ပြီ) နဲ့ (ပြီး) လို့သာရေးရတယ်။ စကားမပီသတာကို နားထောင်ရသလိုပဲ။
Aphasia (အဖေးဇီးယား) ဆိုတာ စကားမပီသတဲ့ရောဂါဖြစ်တယ်။ ဦးနှောက်မှာစကားပြောတာကိုထိန်းချုပ်တဲ့နေရာမှာ ချို့ယွင်းနေလို့ဖြစ်ရတယ်။ ပြောတာရော ရေးတာပါမမှန်ကြဘူး။ လူကြီးတွေမှာပိုဖြစ်တယ်။ အထူးသဖြင့် (ဆထုပ်) ဦးနှောက်သွေးကြောရောဂါခံစားရပြီးရင်ဖြစ်တယ်။ ဦးနှောက်အကျိတ်၊ ခေါင်းထိခိုက်မိတာနဲ့ (ဒီမင်းရှား) ရောဂါ ရသူတွေမှာလည်းဖြစ်ကြတယ်။
အမျိုးအစား (၄) မျိုးရှိတယ်။
၁။ Expressive aphasia = ဘာပြောမယ်တော့သိနေတယ်။ ပြောဇို့ခက်နေတယ်။
၂။ Receptive aphasia = ပြောတာကိုကြားတယ်။ ရေးထားတာကိုဖတ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် စကားလုံးကို အာရုံမယူနိုင်ဘူး။
၃။ Anomic aphasia = အရာဝတ္တု၊ နေရာ နဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို ဘယ်လုံးသုံးစွဲရမလဲမှာ ခက်ခဲနေတယ်။
၄။ Global aphasia = စကားကိုမပြောနိုင်ပါ။ စကားကိုလည်းနားမလည်ပါ။ စာလည်းမရေးနိုင်ပါ။
စကားမပီသူတွေကို ယဉ်ကျေးမှုအရ ကဲ့ရယ်တာမျိုးမလုပ်အပ်ပါ။ ဝဋ်လိုက်တတ်တယ်လို့ လူကြီးတွေက ဆုံးမကြတယ်။ စကားပီသူတွေက ပီအောင်မပြောတာ၊ မရေးတာတွေကိုတော့ အပြစ်တင်ချင်ပါတယ်။ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ဘာသာစကား ပျောက်မှာစိုးလို့။ ဝဋ်အမြဲ ငရဲအပလို့လည်းရှိတယ်။
မြန်မာစာ၊ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို ချစ်တတ်ကြပါစေ။ မြန်မာစကား ပီသအောင်ပြောနိုင်ကြပါစေ။
February 29 ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၂၉)
Vitamin Supplements and Children ကလေးအားဆေး
Craving of the opium addict ဘိန်းစား၏ ဆုတောင်းခန်း
My books စာအုပ်ထုတ်မယ်
Long live Opium
Paper elephant စက္ကူဆင်ဖြူတော်
Caffeine in Tea leaves ကေဖင်း နဲ့ လက်ဖက်
Just Following Orders ခိုင်းပတ်
Flowering plant ပန်း
Untold stories မပြောတော့ ပိုသိသည်
Noise health effects ဆူညံသံနဲ့ကျန်းမာရေး
The cow နွားပြာကြီး
Uniform ယူနီဖေါင်း (သို့) အကြောက်ရောဂါ
News and Books သတင်းများနဲ့ စာအုပ်များ
Chinese billionaires တရုပ်ကုဋေကြွယ်သူဌေးကြီးများ
Fake medicine news ဆေးအတုသတင်း ရေးသင့် မရေးသင့်
Peasants Day တောင်သူလယ်သမားနေ့
Tit usage (တစ်) အသုံးမှန်များ
FAKE Hepatitis C medicine အသည်းရောင် (စီ) ပိုးဆေးအ...
Johnson & Johnson hit with $72m damages in talc ca...
A flower,anecklace ပန်းတပွင့်၊ ဆွဲကြိုးတကုံး
Artificial Insemination သုက်ပိုးထည့်နည်း
Handicapped Fighter ဒုက္ခိတ ကစားသမား
Personalized medicine တဦးချင်းပေးတဲ့ဆေး (သို့) တဥ...
Native beauty ကိုယ့်ဌာနေဝန်းကျင်မှာကွယ် တကယ်အလှရှိတယ်
Factory making fake Hepatitis C drug raided in Pak...
HCV အသည်းရောင် (စီ) ဆေးအတုတဲ့
Riot Police in Myanmar မြန်မာရဲတပ်ဖွဲ့ အစွမ်းပြချက...
Calcium USA High Up အရပ်ရှည်ဆေး (သို့) စိတ်မရှည်ဆေး
Intention unknown တမင်တကာလား
Poetry ကာရံပါ ကဗျာမဟုတ်
Bluetooth-enabled pregnancy kit ဘလူးတုသ်နဲ့ ကိုယ်ဝ...
Red cotton flower on the snow လက်ပံနဲ့ နှင်း
Summer wish နွေဆုတောင်း
Careless mistake on vinyl
The Singer အမိန့်ရအပ်ချုပ်ဆိုင်
Originality ကဗျာ၊ သီချင်း၊ စာသား
Incorrect Spelling သတ်ပုံအမှား တားဆီးကြပါ
Shame on you! စကားပုံအမှား
Village fete ကျေးလက်ထမင်းစားပွဲ
Palpitation Q and A စိတ်လှုပ်ရှားရင် ရင်တွေအရမ်းတုန...
FB junk စုံစီနဖါ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ
Clot-busting drug lowers death risk in this group ...
Immunization Day in our country မြန်မာနိုင်ငံအမျို...
Grammar mistake သဒ္ဒါအမှား ခေတ်စကားမဟုတ်
Professional Ethics စောင့်ထိန်းအပ်သော
The Summer Tree လက်ပံ၏တန်ဖိုး
Drugs and Kidneys ကျောက်ကပ်အပေါ် သက်ရောက်စေတဲ့ ဆေးတွေ
Women, Infants and Children အမျိုးသမီး + မွေးစကလေး...
Trans Fats ထရန့်စ်ဖက်
8 years old girl was diagnosed with Breast Cancer
Fourth branch of government မြန်မာပြည်က အုပ်ချုပ်ေ...
Baschi ပိန်ဆေး အကြောင်းသိကောင်းစရာများ
Mosquito bite (2) နောက်ခြင်တကောင် ကိုက်ပြန်ပြီ
VOA ဒေါ်စုသမ္မတဖြစ်ရေး ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး အကြံပေးချက...
Fitzpatrick scale (ဖစ်ပက်ထရစ်) အရေပြား အမျိုးအစားခ...
Summer Time Infections နွေရာသီမှာ ဆင်ခြင်စရာ ကူးစက...
Summer food နွေမှာ နွေစာတွေလာတော့မည်
Height and Weight Adult Chart အရပ်နဲ့ ကိုယ်အလေးချိ...
America အမေရိကား ဘာများမှတ်သလည်း
Children age, body weight, height
Insecticide-Treated Bed Nets ခြင်နိုင်ဆေးပါတဲ့ ဇြာ...
Save Our Language ကယ်တော်မူပါဘုရား
Otomycosis (ear fungus) နားမှို
Smile! ခြင်ဆေးက ရီရတယ်
Ear Infections (2) နားပိုးဝင်ခြင်း (၂)
Glass vs. Plastic ဖန်လား ပလပ်စတစ်လား
Plastic baby bottles ကလေးတွေအတွက်ဗူး
Chin National Day ဘာသာစကား အလေးထား
Mean world syndrome မီဒီယာရောဂါ မကုတတ်ပါ
Medicine market ransacked ဆေးတွေဖမ်းသတဲ့
Urine output at different ages ကလေးတွေ ဆီးဘယ်လောက်...
Mosquito bite ခြင်ဆေးဆရာဝန် ခြင်ကိုက်ခံရခြင်း
Medical Writings ဆေးပညာစာ
My confession ဝန်ခံချက်
Men face higher risk of cancers linked to oral pra...